लक्जरी गाडी चढ्ने बलिउडका सेलिब्रेटी काे-काे हुन् ? « Nepal Bahas
लक्जरी गाडी चढ्ने बलिउडका सेलिब्रेटी काे-काे हुन् ?
प्रकाशित मिति : ३० पुष २०७८, शुक्रबार १७:०७
३० पुस, काठमाडौं । बलिउडका सेलिब्रेटीहरू आफ्नो व्यावसायिक कामबाहेक बिलासी जीवन बिताउन उतिकै चर्चित छन् । उनीहरू लक्जरी गाडीमा सवार हुन मन पराउँछन् । बलिउडका केही कलाकारसँग त बुलेटप्रुफ गाडी नै छ ।
अभिनेता तथा राजनीतिज्ञ सनी देओलसँग ओडी एड र रेञ्ज रोवर अटोबायोग्राफी जस्ता कैयौं बिलासी गाडी छन् । जबकि उनलाई मनपर्ने गाडी ओडी हो, किनकी यो बुलेटप्रुफ छ । बलिउडका हेण्डसम हंक ऋतिक रोशन मर्सिडिज बेञ्ज बी क्लास गाडी छ । जुन बुलेटप्रुफ हो ।
सुपरस्टार खेसरीलाल यादव रौतहट आउने
सीआइडीका शिवाजी साटम बेरोजगार